ဘယ်လိုသုံးရမယ်ဆိုတာကိုညွှန်ကြားချက် Keto Eat&Fit။ နှစ်ဦးတောတစ်နေ့လျှင်! နေ့စဉ်အပလီကေးရှင်း။ အႏုတ္ ၂၀ တစ်လအတွက်ပေါင်
အသုံးပြညွှန်ကြားချက်များ Keto Eat&Fit
Keto Eat&Fit -အထွေထွေလက္ခဏာအချက်အလက်
Keto Eat&Fit -အဖို့အကာဆန်းသစ်နည်းလမ်းမရှိဘဲကိုယ်အလေးချိန်အစားအသောက်နှင့်မိုးသည်းထန်စွာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြိုးပမ်းနေကြတယ်။ လြဲ၏နေ့စဉ်အသုံးအတောင်အထောက်အကူပြုကြောင်းအလေးချိန်ဆုံးရှုံးဖို့အားဖြင့် ၃-၇ ကီလိုတစ်ပါတ်အတွက်၊ဒါပေမယ့်လည်းအထွေထွေအနာရောဂါငြိမ်းစရာအကျိုးသက်ရောက်မှုပေးသည်၊အစွမ်းသတ္တိနှင့်တက်ကြွ၊ထောက်ပံ့စွမ်းအင်ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်၊စိတ်ဓါတ်များ။
ပါကကျေးဇူးပြုပြီး Keto Eat&Fit အညီအမျှထိရောက်သောနှစ်ခုလုံးယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့အဘို့။ ဆံတု။ မူရင်းကိုဝယ်တောင်တွင်မြန်မာနိုင်ငံသည်ဖြစ်နိုင်ခြေအပေါ်တွင်သာတရားဝင်ဆိုက်။
တစ်ဦးအပိုဆောင်းအစိတ်အပိုင်းဆေးဖက်ဝင်အပင်များ၏အစိတ်အပိုင်းများ၊ကော်ဖီ၊guarana ထုတ်ယူ၊ဗီတာမင် D။
တောင် bhb ရှုပ်ထွေးကိုယ်အလေးချိန်အဘို့ Keto Eat&Fit -သက်သေ
အပိုအလေးချိန်ရှိသည်ချင်တယ်စံ၊အဝလွန်ခြင်း၏မည်သည့်ဘွဲ့နှင့်လိုအပ်တွေကိုဖယ်ရှားဖို့ရ၏အပိုပေါင်နိုင်ရန်အတွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုကာကွယ်တားဆီးနှင့်အခြားနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါများ၊သင်လိုအပ်"အခြောက်အ"အခန္ဓာကိုယ်အဆီအဖြစ်ကြွက်သားထုထည်ကိုတည်ဆောက်။ တောင် bhb ရှုပ်ထွေးကိုယ်အလေးချိန်အဘို့ဘေးကင်းလုံခြုံနှင့်ထိရောက်သောအသီးအသီးအဘို့အမှု။ လျှောက်လွှာ Keto Eat&Fit အပူလောင်ခန္ဓာကိုယ်အဆီဖယ်ရှားတစ္အိတ္၊ဖယ်ရှားခန္ဓာကိုယ်မှပိုလျှံရေဖယ်ရှားရောင်ရမ်းခြင်း၏မျက်နှာ၊ခြေလက်များ၊ဇီဝြဖစ်တိုးတက်ကောင်းမွန်ခြင်းနှင့်ခြုံငုံအစာခြေကျေးရွာအုပ်လုပ်ငန်းဆောင်၊အစာစားချင်စိတ်ဖိနှိပ်နှင့်အထောက်အကူဖို့တည်ထောင်၏အလေ့အကျင့်မုန်လျော့နည်းနှင့်လျော့နည်းစားသုံးခြင်း၏ထုထည်အစားအစာ။
သုံးစွဲဖို့အတောင် Keto Eat&Fit အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့။ ဖို့လုံလောက်တဲ့ရေကိုသောက်၊၁၀၀-၁၅၀။ ထို့အပြင်၊ဒါကြောင့်သောက်ရန်အကြံပြုသည်သင်တန်းကာလအတွင်းအသုံးတောင်တက်ဖို့နှစ်ကိုရေလီတာ၏တစ်ရက်မျှအကြားအသီးအသီး။ နေ့စဉ်သောက်သုံးသောကိုယ်အထိ ၃-၇ ပေါင်တစ်ပါတ်အတွက်-သုံးတောင်၊တမီအသီးအသီး၏အဓိကန့်ညက်များ(မနက်၊နေ့လည်စာနှင့်ညနေပိုင်း)။ နှုန်းကေးရှင်းမှတိုးမြှင့်နိုင်မည်နှစ်ပတ်အတွင်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပို-အပေါ်မူတည်စုစုပေါင်းအရေအတွက်အပိုအလေးချိန်ပေါင်။
သိရန်အရေးကြီး! ရှိပါတယ် contraindications။ တောင် bhb ရှုပ်ထွေးကိုယ်အလေးချိန်အဘို့ Keto Eat&Fit ခေါ်ဆောင်သွားမဖြစ်သင့်ကာလအတွင်းပြင်းထန်စွာနာမကျန်းအပါအဝင်၊စိတျနှင့်နေတာမည်သည့်အမျိုးအစား၊အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်မိန်းကလေးများနှင့်အမျိုးသမီးအတွင်းကိုယ်ဝန်နှင့်နို့တိုက်နေစဉ်။ အတောင်ကိုအောက်မှလူပုဂ္ဂိုလ်များ ၁၈ နှစ်အသက်အရွယ်အတွက်ညှိနှိုင်းနှင့်အတူအထူးကု။